Shanduko Dzakakosha Dzaunofanirwa Kuita Kune Yako Yekutengesa Kick-Off Musangano | Martech Zone
Chitatu, November 15, 2017 Ashley Welch
Zviri kuva kuti nguva yegore zvakare, apo Vatengesi veKutengesa neKutengesa Vanogadzirira musangano wavo wepagore wekutangisa misangano. Haisi basa diki. Kuwedzera kune zvakakosha zvekusarudza kwekuenda, yekuvharira makamuri uye yekuwana nzvimbo yemusangano, kune kusingataurike kumanikidza kumusoro musangano wegore rapfuura. Tingaite sei kuti iwedzere uye ive nani? Ndeapi mutauri vatauri vachakurudzira? Ndeapi mibairo ichareva zvakanyanya kune vatambi vedu vepamusoro?
Tinozviwana. Takaenda kune mazhinji acho pachedu pamusoro pebasa redu, uye isu tinobatsira vatengi vedu kuita zvibodzwa zvezvikwata zvavo nekubvunza kuti: Ko kana iwe ukaronga musangano wako kubva pakuona kwevatengi? Heano mashanu evatengi-centric mazano iwe aunogona kuyedza kuita gore rinouya musangano wakanakisa zvakadaro:
Strategic Akaunti Kuronga. Kana isu tichifunga nezve Strategic Maakaundi, isu tinowanzo funga nezve edu epamusoro maakaundi, vatengi vanotenga zvakanyanya kubva kwatiri. Pamusangano wekutanga, nguva inowanzo kupihwa kuti iongorore kuti ndezvipi zvimwe zvigadzirwa nemasevhisi anogona kutengeswa kuwedzera mari uye kusimbisa kubatana. Iri ibasa rakakosha, asi rinogona kukurumidza kuve rakazvimiririra-ini, ini, isu. Zvigadzirwa zvedu, masevhisi edu, yedu yepazasi mutsara. Izvo zvakare? Fungisisa nezvekuti ndiani waunofunga kuve ako eakavimbika maakaundi maererano ne Kunyanyisa uye Mainstreams. Vatengi vako vane mukurumbira vanogona kuve maakaundi akakura anotenga uye vanakirwe neyakawandisa huwandu hwezvigadzirwa zvako nemasevhisi. Asi iwe unofanirwa kufunga nezvekusanganisira vamwe veVakanyanya vatengi vako: ndeapi vatengi vari kuita zvinonyanya kufadza zvinhu nezvako zvigadzirwa uye masevhisi? Vakoke kuti vapinde muchikamu chevatengi uye uvabvunze kuti vataure nezveakaundi account yavo.
Koka Vatengi kuti Vacherechedze Vatambi Vako Vepamusoro. Vanotengesa vanhu vanoshanda nesimba-uye vanhu vako vanotengesa zvakanyanya vanogona kuve nyore kusarudzika mumunda. Neizvi uye zvimwe zvikonzero, zvakakosha kuti uzive vatambi vako vepamusoro pamberi pevezera ravo. Funga kukoka vatengi vako vevatambi vepamusoro kuti vataure nezvavo- kunyange kuvapa mubairo. Pamwe ndiko kurumbidzwa kwakanyanya kunogamuchirwa nekambani yako.
Spur Innovation neMamiriro Akafanana. Isu tinowanzo kunzwa kubva kune vatengi vedu kuti ivo vanoshuvira kukurudzira. Vatengi vanoda kushanda pamwe nevanokurudzira vatengesi vanogona kuvabatsira kufunga kunze kwebhokisi. Apa ndipo panouya maanalogs. Kuti uuye neanalog huru, fungisisa kwekanguva pane imwe nyaya iri kuedza kukurirwa nebhizinesi rako. Wadaro, funga mamiriro akasiyana zvachose apo vanhu vakafunga nzira yekugadzirisa iro dambudziko rakafanana. Heino muenzaniso:
Rimwe timu ratakashanda navo harina kufunga kuti rakabatana zvakakwana nevatengi vavo. Ivo vakanzwa iro rakawanda rebasa rakagonesa kubudirira kwevatengi vavo zvakaitika kumashure, izvo zvakakonzera kurasikirwa kwechikurudziro chechikwata. Iyo Analog: Musangano wechikwata ichi waiitirwa muNew Orleans, saka takavatora kuti vandoshanyira imwe yemahotera ane mukurumbira eEmeril Lagasse. Zvakawanda seboka iri, vabiki uye sous vabiki vanoshanda kuseri kwechiitiko, uye zvakadaro ibasa ravo iro vatengi vari pakupedzisira kunakidzwa. Chikwata chakatora nguva neMutungamiriri Chef, vanoverengeka sous chef uye General Manager achivabvunzurudza nezve zvakaitika kwavari. Nekuda kweizvozvo, vakatanga kufunga zvakasiyana nezve maitiro avanogona kuita zvakawanda nevatengi vavo uye kuramba vachikurudzirwa.
Chigadzirwa uye Kushambadzira Kugadziridza. Tinoda kuvhara musiyano uripakati pekambani yako nevatengi vako, pamwe nepakati pevako vanogadzira zvigadzirwa, vashambadzi vako nevatengesi vako. Panzvimbo pekukoka kushambadzira kwako uye vezera rako vezvigadzirwa kuti vatore kurodha kwavo kwazvino uye kukuru, vabvunze kuti vauye nenhau dzavo pamwe nepenzura yakakwenenzverwa, uye shandisa nguva yekurovera kubatanidza chigadzirwa, kushambadzira, uye vatengesi vako nevatengi. Izvi zvinonyanya kushanda zvakanaka neTip # 1 - yako Extreme uye Mainstream vatengi. Funga nezve izvi sekuyedza kukurukura nevatengi nezvezvipo zvitsva uye kuwana chaiyo-nguva mhinduro kubva kune vanhu vanonyanya kukoshesa-ivo vanozozvitenga.
Unyanzvi-kuvaka. Zano redu rekupedzisira rine chekuita nekuvaka hunyanzvi seti yako yekutengesa. Vatengesi vanhu vanogara vachitsvaga nzira dzekuvandudza hunyanzvi hwavo, kuvandudza mutambo wavo uye kunakidzwa nekubudirira kukuru. Tichipa theme yedu yevatengi-centricity, isu tichagovana chatinofarira chiitiko chedu:
Tinoda kutumira vanotengesa vanhu uko kwavanonzwa kusununguka-kunze mumunda! Tsvagiridzo nzvimbo dzekutengesa munzvimbo yako yekutora. Tarisa nzvimbo dzekutengesa edza kutsvaga maviri maviri mukati meyakajairika yakatwasuka iyo yakaderera uye yakakwira magumo. Semuenzaniso, Toys R Isu uye Kuvaka-a-Bear kumatoyi evana, Chevy uye Tesla dealership yemota, zvichingodaro. Chiitwa ichi chakanakisa kuitwa vaviri vaviri, uye basa revaviri roga nderekushanyira zvitoro zvavo zviviri uye kunyatsoteerera kune izvo zvinowedzera kana kudzikisira vatengi kuita. Isu tinovimbisa kuti zvikwata zvako zvinodzoka zvichikurudzirwa nezvinhu zvinoshamisa (uye zvinotyisa zvinoshamisa) zvavakasangana nazvo uye vanozove neruzivo rutsva rwavanogona kushandisa kune avo pachavo hukama hwevatengi.
Kufunga nezvekurohwa kwako kubva pamaonero evatengi vako kunogona kurerutsa uye kukurudzira kuronga kwako-uye kutungamira kune zvinogutsa zvibereko uye rinobudirira gore idzva. Tinokukurudzira kuzunza yako inotevera kick-off uye edza aya mazano kuti uchengetedze vatengi vako chaipo pavanenge vari: pakati pezvose.
Tags: musangano wekutengesa wegore negoretangamusangano wekutangamatsva ekushambadziraZvigadzirwa Kugadziriswakutengesa kutangamisangano yekutengesakutengesa kuitakuronga kwekutengesakutengesa kudzidzisakuronga account kurongavatengesi vepamusoro
Ashley Welch naJustin Jones vakabatana Somersault Innovation, Dhizaini Yekufunga inotaurisa inopa nzira yakasarudzika yekuvandudza kwekutengesa. Ivo ndivo vanyori veNaked Sales: Maitiro Ekufunga Kufumura Kunoratidza Zvinotarisirwa nevatengi uye Drives Revenue. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya, www.somersaultinnovation.com.
3 Nzira dzeKunyore Unganidza Tarisiro Dhata neLinkedIn Yakabatana Yakatungamira Yekutungamira Zera Mafomu